Isoftware Engcono Kakhulu Yokuhlela Amavidiyo Windows 10 (Ivuselelwe ngo-2020) - Ama-Softwares
Isoftware enhle kakhulu yokuhlela ividiyo ikulethela ukuguquguquka kokugqamisa izici zevidiyo ofuna ukuyikhombisa. Ungenza ngokwezifiso uhlaka ngalunye noma i-engela ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu. Ezweni elisebenza ngokwenhlalo lapho ukufunwa 'kokuqukethwe okunothile' kuphezulu kakhulu, isoftware yokuhlela ividiyo iyimpahla ebaluleke kakhulu.
Kodwa-ke, akuthina sonke esikwazi ukukhokhela isoftware ebangeni eliphambili. Kuthiwani uma kunezinye izindlela kule software ezikulethela ezokungcebeleka ezifanayo? Lolu hlu lukulethela isoftware yokuhlela ividiyo ehamba phambili ephezulu eyonelisa izidingo zakho ezahlukahlukene. Noma ngabe ufuna ukugqama ngokuqukethwe kwakho noma ubuke ubuhlakani bakho, ziyithuluzi elibukwayo eliphelele.
Kulungile! Usuzongena engcebweni yabahleli bamavidiyo wamahhala. Kepha ngaphambi kwalokho, ake sandise okuthe xaxa kulezi zinhlelo zokusebenza. Silungiselele uhlu lwamaphakeji wesoftware wokuhlela amavidiyo aphezulu amahlanu ongawalanda futhi uwasebenzise mahhala kuwe Windows 10 PC.
Lisiza Kanjani Ithuluzi Lokuhlela Ividiyo?
Ngaphandle kwezinzuzo ezinikezwe ngaphezulu, ithuluzi lokuhlela ividiyo lingakusiza ukuthi uchaze kabusha ikhwalithi nombala. Ungahlanganisa ividiyo engaphezu kweyodwa bese wenza okuthile okuhehayo. Uma uke wahlangabezana nama-mashup ahlukahlukene noma i-fusion noma ama-showreels ahlukahlukene, konke kungenzeka ngalawa mathuluzi wokuhlela ividiyo.
Uma uku-department yezokumaketha, kungakusiza ukuthi ubonise umkhiqizo wakho kangcono. Kukulethela inketho yokwengeza imiphumela ehlukahlukene kubadali bokuqukethwe, unciphise izingxenye ezingasebenzi, nokunye okuningi. Kukonke, njengama-softwares omsindo wamahhala, lokhu kukusiza ngamathuluzi anhlobonhlobo.
Lolu hlu lunabahleli bevidiyo abahlukahlukene kusuka ku-minimalist kuya kukhithi yethuluzi eligcwele. Kusukela ekuhlelweni okusheshayo kuya ekunakekelweni okujulile, uzothola konke. Ingxenye ehamba phambili ukuthi bonke bakhululekile. Ngakho-ke ake siqale:
Uhlu Lwama-Softwares Ahlelayo Wevidiyo:
Manje isoftware yokuqala yokuhlela ividiyo ohlwini ingeyabachwepheshe. I-Blender ingumhleli wevidiyo ovulekile otholakala kuzo zonke izinhlelo ezinkulu zokusebenza. Kukulethela inketho yokwenza imisebenzi eyahlukahlukene kusuka ekunciphiseni okuyisisekelo kanye nezidingo zokuphindaphindwa kuya kumasking nokulungisa umbala, ngisho nokungeza imiphumela.
Ekuqaleni, bekuyithuluzi elithuthukisa i-3D Video, futhi leso sici sisekhona. Ngakho-ke, unokuningi kunalokho ongakucela. Uthola nokuhlelwa komsindo ngepulatifomu. Kodwa-ke, i-Blender ayisona isihleli esivumelana nabaqalayo sevidiyo. Kungadinga ukufunda okuthile ngaphambi kokukusebenzisa ngokugcwele.
I-OpenShot ingenye yesofthiwe yomhleli wamavidiyo wamahhala wewindows 10 okulula ukuyilanda nokuyisebenzisa. Uma ufuna okuthile okunobungani bokuqalisa ngokusebenziseka kalula kwesikhombimsebenzisi, i-Openshot ingaba yinkomishi yakho yetiye. Kuhle kakhulu ekuhlelweni kwevidiyo eyisisekelo kusuka ekunciphiseni, ekuphambeni, nasekungezeni imiphumela elula. Kumabhizinisi amancane noma ibhizinisi, kungahle kube yisoftware enhle.
Ikunikeza izici ezahlukahlukene zokuhlela ividiyo njengokulungiswa kombala, i-greyscale neminye imiphumela. Ungasebenzisa noma isici esiyinhloko ukudala ukugqwayiza. Akusebenzi kuhlelo futhi isebenza ngokukhululeka. I-OpenShot iphambene neBlender, ithuluzi lokusetshenziswa kalula. Njengoba ingumthombo ovulekile, ungayisebenzisa kuWindows, Linux, noma kwi-Mac.
Nawu omunye umugqa olula futhi osebenziseka kalula wokuhlela ividiyo olungele abaqalayo. Manje, lena ayizi nezici eziningi noma imiphumela. Ine-interface ekhangayo. Ungahlela amavidiyo wangempela noma opopayi ngqo kule nkundla. Noma kunjalo, isekela imiyalo eyisisekelo.
Kuhle ukuhlunga, ukuhlela okuyisisekelo, ukusika, ukufaka ikhodi neminye imisebenzi elula. Ngamafuphi, ungayibiza ngokuthi ithuluzi lokuhlela ividiyo elisezingeni lokungena. Kuluhlu ukuze kube lula, futhi uma ufuna ithuluzi lemfuneko yokusebenza okuphansi, lokhu kungenye yezinto ezinhle kakhulu.
Ingabe ufuna isihleli sevidiyo se-HD? Lona kufanele awele ngqo eqoqweni lakho. IShotcut ekuqaleni bekuyisoftware yokuhlela ividiyo yeLinux. Ngokuhamba kwesikhathi, yanda yaya kwamanye ama-OS. Ngakho-ke, inesixhumi esibonakalayo esintofontofo kunabahleli bevidiyo ababili bangaphambilini.
Ingxenye ehamba phambili ngeShotcut yindlela yayo yokusebenziseka kalula. Unezifundo eziningi zevidiyo zokufunda isoftware, ngakho-ke awudingi ukuya kwenye indawo. Ixhasa amafomethi amaningi wevidiyo ngaphandle kokuthinta ikhwalithi yawo. Njengoba kuyithuluzi lokuhlela ividiyo lamahhala, uthola ukufinyelela kuzici, amathuluzi, nokunye ukuzilibazisa ongakuthola ngokujwayelekile kuthuluzi lokuhlela ividiyo ye-premium.
5. IHitfilm Express
Mhlawumbe ufuna ukunikeza ukuthintwa kwamafilimu aseHollywood akhiqiza kakhulu kumavidiyo akho? Ngemuva kwalokho iHitfilm izoba uhlelo lokusebenza lokuhlela ividiyo mahhala lonke-in-one. Ikulethela izinketho ezahlukahlukene kuzici, amathuluzi, imiphumela, nokuhambisana.
Ekuqaleni, kungahle kube yinkohliso ukuyisebenzisa, kepha iba lula. IHitfilm ingomunye wabahleli bamavidiyo abahamba phambili ongabacela. Noma ngabe ufuna ukwengeza umsebenzi wesikrini esiluhlaza okotshani, mesh ezinye iziqeshana ndawonye, ​​noma engeza imiphumela ehlukahlukene, kuyithuluzi elihle kakhulu elisezingeni lobuchwepheshe. Noma kunjalo, ayitholakali ku-Linux.
6. Isixazululo seDaVinci
Lolu hlu belungeke luphelele ngaphandle kwe-DaVinci Resolve. Kuyithuluzi lokuhlela ividiyo eliqinile futhi lamahhala elinikela ngokusekelwa kwekhwalithi yevidiyo eyi-8K. Manje hlanganisa lokho nezici 'ezihlakaniphile' kanye nekhono lokusebenzisa isoftware online naku-inthanethi. Umsindo ulinga kakhulu, akunjalo?
Yize kumahhala, kukhona inguqulo ye-premium evumela ‘ukuhlela ividiyo ngokugcwele-kwesitudiyo.’ Ngamanye amazwi, ungathola ikhwalithi yezinhlelo ze-TV namabhayisikobho. Inezilawuli ezihlakaniphile, futhi ngokuhamba kwesikhathi, ikhule yaba inketho eyinhloko kubachwepheshe abaningi bokuqukethwe nabadali bamavidiyo. Awusoze wenza okungahambi kahle ngale software, kepha kuzofanele uyifunde.
Masithathe ubuchwepheshe bezinhlelo zokusebenza ezihlelwe ngenhla bese sikufaka kumuzwa womsebenzisi onobungane kakhulu. Lapha uthola kuvidiyo, ithuluzi elikulethela izinketho nezici ezifanayo, kepha kubasebenzisi abasebasha abaqalayo noma bezinga lokungena. Kuvame kakhulu eminyangweni eminingi yezokumaketha ngekhwalithi nokusebenza kwalo okungenakulinganiswa.
Kodwa-ke, kukhona ukubuyela emuva okunzima okusekela umsindo owodwa ngasikhathi. Ngakho-ke, kungcono ukumaketha, ukubhuloga, nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo. Uma ufuna okuthile okwazi kahle emnyangweni wokulalelwayo, ngeke uthole okuningi. Uma ufuna isihleli sevidiyo sesethulo nezinye izidingo zokuhlela ividiyo, lokhu kungukukhetha okuhle.
8. Isihleli sevidiyo seVSDC Pro
Le enye isoftware yokuhlela ividiyo yamahhala neyiphrimiyamu. Ikulethela uhla oluphelele lwamathuluzi abalulekile njengokulungiswa kombala, imiphumela ehlukahlukene, izihlungi zezithombe, nokuthi yini. Uthola ukufinyelela kwezinye izihlungi ezithandwa kakhulu futhi ezisetshenziswa kakhulu.
Ukuze uhlele kahle, uthola ukufihla ubuso, ukufiphaza, namanye amathuluzi athile. Ngokwengeziwe, kulula kuwe ukuthi wabelane ngomsebenzi ezinkundleni zokuxhumana. Iphinde isekele ukuhlelwa kwevidiyo ye-HD ku-HEVC nakwezinye izinhlobo ukonga ubukhulu. Okubaluleke kakhulu, i-premium ayibizi kakhulu, noma.
9. Imisebenzi elula
I-Lightworks kungenye yesikhulumi esincomekayo esikulethela ukuhlela okuphezulu kokucheba okulula. Ungashintsha ijubane noma uqhubeke nokuhlela ividiyo ngenkathi ulayisha noma ungenisa okunye okuqukethwe okuhambisanayo. Inembile impela, futhi ungahlela ama-engeli amaningi ekhamera wephrojekthi ephelele.
Mhlawumbe isici esihle kakhulu ukwaba ngesikhathi sangempela ongasebenza njengeqembu. Ngakho-ke, kubantu abasebenza kusuka ezindaweni ezikude noma emakhaya, kuyindlela eguquguqukayo kakhulu. Ungabelana futhi futhi ulayishe kalula amavidiyo kuzingxenyekazi ezahlukahlukene. Ngokubambisana okuhlukile, kubekwa phansi umhleli wevidiyo omuhle kakhulu.
Kungamangaza kancane, kepha i-Apple inethuluzi lokuhlela ividiyo lamahhala. iMovie iyithuluzi lokuhlela ividiyo elimangalisayo nelizodinga ipulatifomu ye-Mac. Asikho isidingo sakho sokuthola abanye abahleli bamavidiyo ngaphandle kokuthi ufuna ukungena ekuhlelweni kobungcweti.
Yipulatifomu ephelele exhunywe kwisitoreji samafu se-Apple ngomsebenzi wokulayisha nokugcina kalula. Okubaluleke nakakhulu, ine-interface eqondile. I-Apple ibilokhu isebenze njalo ekunikezeni 'ukusetshenziswa okulula' kubathengi bayo. Lapha uthola ithuluzi lamahhala levidiyo elikulethela ngqo lokho ukuhlola ubuhlakani bakho.
Kukhona abanye abanjengoWindows Movie Maker ongabasebenzisa, kepha abalulekile, futhi simboze ezinye izindlela zabo ezingcono kakhulu kuzingxenyekazi eziningi. Lolu hlu lwabahleli bevidiyo abaphezulu lubheka abasebenzisi ngezidingo ezahlukahlukene. Yingakho uthola amathuluzi wokuhlela ividiyo wamahhala nalawo anokusetshenziswa kobuchwepheshe obuningi ngokubhaliselwe.
Noma ngabe unesidingo esibalulekile, umkhankaso wokumaketha, ibhulogi, noma ukugcinwa okuphephile kwezinkumbulo, lawa mathuluzi azolingana ngqo kuhlu lwakho. Ungasebenzisa amathuluzi ahlukile ngaphandle kokukhipha uhlelo lwakho, noma. Ngakho-ke, lena indawo yakho eyodwa yokumisa isoftware yokuhlela ividiyo enhle kakhulu.
Ungasithola Kanjani Isilingo Samahhala Sezinsuku ezingama-30?